ब्ल्याकउड विश्वको सबैभन्दा महँगो काठ : १ किलो कै १२ लाख — newsparda.com
ब्ल्याकउड विश्वको सबैभन्दा महँगो काठ : १ किलो कै १२ लाख
केहि रुखका काठ अविश्वसनीय रूपमा महँगो हुने गर्दछन् । केहि दुर्लभ भएका कारणले पनि महँगो हुन्छन् । चन्दनको काठको मुल्य प्रतिकेजी १० हजार आसपासको मुल्य पर्दछ । तर सायद तपाईलाई थाहा नहोला, चन्दनको काठभन्दा पनि महँगो काठ हुने गर्दछ ।यो काठ मुल्य यति धेरै छ कि यसलाई किन्नुअघि ठुला ठु्ला धनाढ्यले समेत एक पटक सोच्नु पर्दछ ।
विश्वको सबैभन्दा महँगो काठको उपाधी पाएको यो काठ हो, अफ्रीकी ब्ल्याकउड ( blackwood ) । यसलाई पृथ्वीमा रहेको सबैभन्दा महँगो रुख मध्ये एक मानिन्छ । एक किलोग्रामको यस काठको मुल्य आठ हजार पाउण्ड अर्थात करिब १२ लाख रुपैयाँ पर्दछ । जबकि यति रकममा एक सामान्य घर, सस्तो जग्गा समेत आउन सक्छ ।
अफ्रिकी ब्ल्याकउडको रुख अरु रुखको तुलनामा अत्यन्त कम र दुर्लभ छ । यो रुखको उचाई २५ देखि ४० फिटसम्म हुने गर्दछ । यो मध्य र दक्षिणी अफ्रिकाको २६ देशमा मात्र पाइन्छ । यो केवल सुख्खा स्थानमा मात्र हुने गर्दछ ।मुख्यतः अफ्रिकी ब्ल्याकउड शहनाई, बाँसुरी र गिटार जस्ता संगीत वाद्ययन्त्र बनाउन उपयोग गरिन्छ । यस अलावा बलियो हुने भएकाले ब्ल्याकउड फर्निचर बनाइन्छ । तर टिकाउ हुने भएकाले यसको फर्निचर करौडौंमा बिक्री हुन्छन् । साथै यो रुख उपयोग योग्य काठ हुन लगभग ६० बर्ष लाग्दछ ।
लकडाउनमा धेरैजनाको तौल बढिरहेको सुन्ने र देख्ने गरेका छौं तर कोरोनाको उत्पत्ति स्थल ऊहानको यो घटना भने असाधारण छ । यहाँ पाँच महिनाको लकडाउनका बेला २६ वर्षका झाउको तौल १ सय १ किलो बढेको छ । अत्यधिक तौल बढेका कारण उनलाई सास फर्न समस्या भयो । झाउ एक साइबर क्याफेमा काम गर्छन् । उनी पहिले नै बढ्दो तौलका कारण तनावमा थिए तर चीनमा निकै कडा रुपमा लागू गरिएको लकडाउनको क्रममा उनको तौल तीब्र रुपमा बढ्दै गयो ।
डिसेम्बरमा झाउको तौल १७७ किलो थियो । लकडाउनका क्रममा पछिल्लो पाँच महिनामा उनको तौल २७८ पुग्यो । ८ अप्रिलमा जब चीनमा लकडाउन हटाइयो झाउ आफ्नो बढ्दो तौलका कारण हिँड्डुल गर्न सकिरहेका थिएनन् । सास फर्न समस्या भइरहेको थियो । उनलाई अस्पताल नै भर्ना गर्नुपर्ने भयो ।
४८ घण्टासम्म निद्रा लागेनः ऊहान युनिभर्सिटीको झान्गनेन अस्पतालमा झाउको उपचारमा संलग्न डाक्टरले आफूलाई ३१ मे मा बिरामीको फोन आएको र उनलाई ४८ घण्टादेखि निद्रा नलागेको जानकारी दिएको बताए । उनका अनुसार बिरामीलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेको थियो र निकै मुश्किलले कुरा गरिरहेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट स्वास्थ्यकर्मीको टोली उनको घर पुगेको डाक्टरले जानकारी दिए ।
१० व्यक्तिको सहयोगमा अस्पताल पुर्याइयोः झाउललाई ६ सुरक्षाकर्मी र ४ स्वास्थ्यकर्मीको मद्दतमा अस्पताल पुर्याइएको हो । परीक्षणपश्चात् उनको ‘हार्ट फेल्योर र रेस्टिरेटरी डिसफङ्सन’ भएको पत्ता लाग्यो । चिनियाँ मिडियाका अनुसार ९ दिनसम्म २४ घण्टा स्वास्थ्यकर्मीको हेरविचारमा अब झाउको स्थिती सुधारोन्मुख छ ।
शल्यक्रियापश्चात् सुध्रियो स्थितीः
तौल कम गर्नका लागि झाउको शल्यक्रिया भएको छ । शल्यक्रियाको क्रममा एउटा हिस्सा हटाइएको छ । डाक्टरका अनुसार अबको तीन महिनामा झाउले २४ किलो तौल घटाउनु पर्नेछ । यसमार्फत् शल्यक्रियाको खतरा घट्ने गर्छ ।
स्रोतः रिपब्लिक वर्ल्ड
….त्यसपछि जबर्जस्ती हातमा समातेर जंगलतर्फ तान्दै लगेर….
पार्टीभित्रका अनुशासनहीन पक्षलाई सम्झाउने-बुझाउने प्रयास सकियो, अब एक्शन शुरु हुन्छ…
वडाध्यक्षले सेवाग्राही कुटे (भिडियोसहित)
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई हराउने योजना बुनिदै…
…अनि डिनर चल्दै थियो नमस्कार गरेर म विदा भए : बामदेव गौतम
मानसिक सन्तुलन गुमाएकी अन्दाजी २६ वर्षीया युवतीको क र णी पछि ह त्या गरेको आशंकामा...
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अलोकप्रिय बनाउने...
काठमाडौ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपा`ली कांग्रेस अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी)को पक्षमा उभिएको छ ।...
पोखरा । तनहुँको भीमाद ८ का वडाध्यक्षले बिहीबार बिहान एक सेवाग्राहीलाई कुटेका छन् । वडा...
काठमाण्डौँ । आफू समस्यामा पर्ने जान्दाजान्दै पनि जेसुकै होस्, प्रधानमन्त्रीमा चुनाव गराइहाल्ने अचम्मको हतारो पाइन्छ...
एमाले भित्र खैलबैला हुने गरी बिना मगरले पाइन् नयाँ जिम्मेवारी
नयाँ पार्टी खोल्दै माधव नेपाल, चुनाव चिन्ह उदाउदो सुर्य पार्टीको नाम यस्तो…
यी नेताहरुको टिमसहित नयाँ पार्टी खोल्ने तयारीमा माधव नेपाल हेरौं नामावलीसहित
एमाले र जसपाको संयुक्त सरकार – बालुवाटारमा मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति
ओलीलाई छोडे माओवादीका यी ३ नेताले, भने हामी आफ्नै पार्टीमा फर्कीयौ !
माधव नेपाल पक्षले छान्यो नयाँ अध्यक्ष, एमालेभित्रै भयंकर उथलपुथल
मन्त्रिपरिषद् पुनः गठनको तयारी, को–को भित्रिँदै, को–को बाहिरिँदै…
फेरीयो नेपाली राजनिति नयाँ प्रधानमन्त्रीमा अगाडि आए अर्कै !
सूर्य चिन्हसहितको एमालेको आधिकारिकता नेपाल–खनाल समूहलाई !